လကျစတာ ၂ – ၂ ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျမှ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ – Premier League Special
လကျစတာ ၂ – ၂ ယူနိုကျတကျ ပှဲစဉျမှ ယူနိုကျတကျကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ
December 26, 2020 yeminn Article 0
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဒီနပှေဲ့စဉျမှာ လကျစတာအသငျးကို ( ၂ ) ကွိမျတိုငျ ဦးဆောငျကစားနိုငျခဲ့ပမေယျ့ ပှဲအပွီးမှာ တဈဖကျ ( ၂ ) ဂိုးစီ သရကေခြဲ့တယျ။ ဒီရလဒျကွောငျ့ အဝေးကှငျးရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲရပျတနျ့သှားခဲ့သလို အဆငျ့(၂)နရောကိုတကျလှမျးနိုငျတဲ့အခှငျ့အရေးလညျး လကျလှတျခဲ့ရပါတယျ။ ဒီနပှေဲ့မှာ သှငျးဂိုးတှရေယူပေးခဲ့ကွတဲ့ ရကျဖို့ဒျ နဲ့ ဖာနနျဒကျတို့ကတော့ မှတျတမျး အသဈတှရေရှိခဲ့ကွပါတယျ။ ရကျဖို့ဒျ က ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုး (၅၀)ပွညျ့ကစားသမားဖွဈခဲ့သလို ဘရုနိုကလညျး ဒီရာသီမှာ သှငျးဂိုး (၁၀)ဂိုးရရှိလာခဲ့ပါတယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးကစားသမားတှရေဲ့ ဒီနပှေဲ့မှာ စှမျးဆောငျရညျတှကေ တဈဦးခွငျးစီမှာတငျ အကောငျးနဲ့ အဆိုးဒှနျတှဲနခေဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့တှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျကို ဘယျလိုသတျမှတျခဲ့ကွပါသလဲ….
ဒီဂီယာ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၅)
ဂရုစိုကျမှု အားနညျးပွီး ဘားနကျရဲ့ ခပြေဂိုးမှာလညျး လိုအပျခကျြတှေ ရှိခဲ့တယျ။
လငျဒီလော့ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၅)
right back အဖွဈ အံ့သွဖှယျ ရှေးခယျြခဲ့ပွီး ကစားရတာ သကျသောငျ့သကျသာ မရှိပဲ ပုံမှနျခွစှေမျး ပြောကျဆုံးခဲ့တယျ။ နောကျကြောဒဏျရာကွောငျ့ ဒုတိယပိုငျးမှာ လူစားလှဲခဲ့တယျ။
ဘိုငျလီ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆)
အစောပိုငျးကာလမှာ ဗာဒီကို ထိနျးခြုပျဖို့ အနညျးငယျ ရုနျးကနျခဲ့ရပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာ တညျငွိမျစှာ ကစားခဲ့တယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ အောကျတိုဘာလ စပါးနဲ့ပှဲစဉျမှာ ပရီးမီးယားလိဂျ နောကျဆုံးကစားခဲ့ပွီး ယခုပှဲစဉျမှ ပွနျလညျပါဝငျခှငျ့ရတာ ဖွဈတယျ။
လကျစတာရဲ့ ဒုတိယ ခွပေဂိုးမှာ ဗာဒီကို လူကပျထားခဲ့သငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဗာဒီလိုတိုကျစဈမှူးတဈယောကျအတှကျ ဂိုးရရှိဖို့အခှငျ့အရေးဆိုတာ အမြားကွီးမလိုပါဘူး။ ဗာဒီရဲ့ ခွပေဂိုးကလညျး အတျောကိုကောငျးမှနျတဲ့ အဆုံးသတျမှုတဈခုပါပဲ။
မကျဂှိုငျးယား – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆)
ဘားနပျရဲ့ ခွပေဂိုးကို ကနျသှငျးခှငျ့ မပွုဖို့ ကွိုးစားခဲ့သငျ့တယျ။ အသငျးကို အကောငျးဆုံး ဦးဆောငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ဗာဒီကို လူကပျမထားတဲ့အတှကျ ဒုတိယခပြေဂိုး ပေးခဲ့ရတယျ။
လုချရှော – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၇)
လကျစတာက လငျဒီလော့ဘကျကိုပဲ ပဈမှတျထားပွီး တိုကျစဈဆငျခဲ့တဲ့အတှကျ ခံစဈပိုငျးမှာ သိပျအလုပျမရှုပျခဲ့ပါဘူး။ free kick ကနေ ဂိုးဖနျတီးမှု ရလုနီးပါး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ မကျဂှိုငျးယားရဲ့ခေါငျးတိုကျသှငျးခကျြက ဂိုးလှနျဘောဖွဈသှားခဲ့တာကွောငျ့ သှငျးဂိုးအဖွဈမရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီနပှေဲ့မှာ သူ့ဟာ ခွစှေမျးပွနိုငျတဲ့ ကစားသမားဖွဈတယျ။
မကျ တှမျမီနေး – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆)
ဖရကျနဲ့ကှငျးလယျခံစဈအတှဲ ဖွဈပွီး ကစားပုံက မာမာထနျထနျ ကစားခဲ့ပမေယျ့ ပေါ့ဘာ လူစားမဝငျလာခငျအထိ ပထမပိုငျးမှာသူ့ရဲ့စှမျးရညျဟာ အရငျပှဲတှကေထကျလြှော့ကနြခေဲ့ပွီး ကှငျးလယျမှာ ဘောလုံးတညျမရခဲ့တာကိုလညျး တှခေဲ့ရပါတယျ။
ဖရကျ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆ )
ဒီပှဲမှာတော့ ပုံမှနျခွစှေမျးပွဖို့ ရုနျးကနျခဲ့ရတယျ။ ရကျဖို့ဒျအတှကျ အခှငျ့အရေးတဈကွိမျဖနျတီးပေးခဲ့တယျ။
ဖာနနျဒကျ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆)
ယူနိုကျတကျရဲ့ ပထမသှငျးဂိုးကို ဖနျတီးပေးခဲ့သလို လကျစတာရဲ့ ခပြေဂိုးကလညျး ဘရူနိုနဲ့ မကငျးခဲ့ပါဘူး ။ ယူနိုကျတကျကို2– 1 အနအေထားနဲ့ ဦးဆောငျထားနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျပေးခဲ့တယျ။
ဂြိမျးဈ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၅)
ယူနိုကျတကျသှငျးဂိုးရရှိဖို့ အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ လိဒျအသငျးနဲ့ ပှဲစဉျက ခွစှေမျးမြိုးတော့ ပွသထားနိုငျခွငျးမရှိခဲ့တာ တှရေ့တယျ။
ရကျဖို့ဒျ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆)
အပိုငျအခှငျ့အရေးတှေ လှဲခြျောခဲ့ပမေယျ့ ယူနိုငျတကျအတှကျ ဦးဆောငျဂိုး ရယူပေးခဲ့တယျ။ ဂိုးသမားနဲ့ တဈဦးခငျြးအနအေထား ဂိုးသှငျးခှငျ့ရပမေယျ့ ရှကျမိုကျကယျ ကာကှယျသှားခဲ့တယျ။
မာရှယျ – စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၅)
ဘောလုံးပကျြမှုမကွာခဏဖွဈခဲ့ပွီး ခွစှေမျး ပွသနိုငျခွငျးမရှိခဲ့သလို အသငျးနဲ့ ခြိတျဆကျကစားနိုငျမှု နညျးပါးခဲ့ပါတယျ။ ဂိုးသမားနဲ့ တဈယောကျခွငျးတှဆေုံ့ပွီးဂိုးသှငျးယူနိုငျခဲ့ပမေယျ့ VAR နဲ့ပွနျလညျစဈဆေးခဲ့ရာမှာ လူကြှံနခေဲ့တာကွောငျ့ သှငျးဂိုးအဖွဈသတျမှတျခံခဲ့ရခွငျးမရှိပါဘူး
လူစားဝငျကစားသမားတှရေဲ့ စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြတှမှော ကာဗာနီက အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ဖာနနျဒကျရဲ့ သှငျးဂိုးရရှိအောငျဖနျတီးပေးနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ (၇)ရရှိခဲ့ပွီး ပေါ့ဘာနဲ့ တှနျဇီဘီတို့ကတော့ စှမျးဆောငျရညျသတျမှတျခကျြ (၆) သာရရှိခဲ့ကွပါတယျ။
လက်စတာ ၂ – ၂ ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်မှ ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ လက်စတာအသင်းကို ( ၂ ) ကြိမ်တိုင် ဦးဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပွဲအပြီးမှာ တစ်ဖက် ( ၂ ) ဂိုးစီ သရေကျခဲ့တယ်။ ဒီရလဒ်ကြောင့် အဝေးကွင်းရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲရပ်တန့်သွားခဲ့သလို အဆင့်(၂)နေရာကိုတက်လှမ်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်း လက်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာ သွင်းဂိုးတွေရယူပေးခဲ့ကြတဲ့ ရက်ဖို့ဒ် နဲ့ ဖာနန်ဒက်တို့ကတော့ မှတ်တမ်း အသစ်တွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ရက်ဖို့ဒ် က ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက် သွင်းဂိုး (၅၀)ပြည့်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့သလို ဘရုနိုကလည်း ဒီရာသီမှာ သွင်းဂိုး (၁၀)ဂိုးရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းကစားသမားတွေရဲ့ ဒီနေ့ပွဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည်တွေက တစ်ဦးခြင်းစီမှာတင် အကောင်းနဲ့ အဆိုးဒွန်တွဲနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသလဲ….
ဒီဂီယာ – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၅)
ဂရုစိုက်မှု အားနည်းပြီး ဘားနက်ရဲ့ ချေပဂိုးမှာလည်း လိုအပ်ချက်တွေ ရှိခဲ့တယ်။
လင်ဒီလော့ – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၅)
right back အဖြစ် အံ့သြဖွယ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကစားရတာ သက်သောင့်သက်သာ မရှိပဲ ပုံမှန်ခြေစွမ်း ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်။ နောက်ကျောဒဏ်ရာကြောင့် ဒုတိယပိုင်းမှာ လူစားလှဲခဲ့တယ်။
ဘိုင်လီ – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆)
အစောပိုင်းကာလမှာ ဗာဒီကို ထိန်းချုပ်ဖို့ အနည်းငယ် ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ တည်ငြိမ်စွာ ကစားခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ စပါးနဲ့ပွဲစဉ်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် နောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီး ယခုပွဲစဉ်မှ ပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရတာ ဖြစ်တယ်။ လက်စတာရဲ့ ဒုတိယ ခြေပဂိုးမှာ ဗာဒီကို လူကပ်ထားခဲ့သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗာဒီလိုတိုက်စစ်မှူးတစ်ယောက်အတွက် ဂိုးရရှိဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာ အများကြီးမလိုပါဘူး။ ဗာဒီရဲ့ ခြေပဂိုးကလည်း အတော်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ အဆုံးသတ်မှုတစ်ခုပါပဲ။
မက်ဂွိုင်းယား – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆)
ဘားနပ်ရဲ့ ခြေပဂိုးကို ကန်သွင်းခွင့် မပြုဖို့ ကြိုးစားခဲ့သင့်တယ်။ အသင်းကို အကောင်းဆုံး ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဗာဒီကို လူကပ်မထားတဲ့အတွက် ဒုတိယချေပဂိုး ပေးခဲ့ရတယ်။
လုခ်ရှော – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၇)
လက်စတာက လင်ဒီလော့ဘက်ကိုပဲ ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက် ခံစစ်ပိုင်းမှာ သိပ်အလုပ်မရှုပ်ခဲ့ပါဘူး။ free kick ကနေ ဂိုးဖန်တီးမှု ရလုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မက်ဂွိုင်းယားရဲ့ခေါင်းတိုက်သွင်းချက်က ဂိုးလွန်ဘောဖြစ်သွားခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုးအဖြစ်မရရှိခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ သူ့ဟာ ခြေစွမ်းပြနိုင်တဲ့ ကစားသမားဖြစ်တယ်။
မက် တွမ်မီနေး – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆)
ဖရက်နဲ့ကွင်းလယ်ခံစစ်အတွဲ ဖြစ်ပြီး ကစားပုံက မာမာထန်ထန် ကစားခဲ့ပေမယ့် ပေါ့ဘာ လူစားမဝင်လာခင်အထိ ပထမပိုင်းမှာသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ဟာ အရင်ပွဲတွေကထက်လျှော့ကျနေခဲ့ပြီး ကွင်းလယ်မှာ ဘောလုံးတည်မရခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဖရက် – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆ )
ဒီပွဲမှာတော့ ပုံမှန်ခြေစွမ်းပြဖို့ ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ ရက်ဖို့ဒ်အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ဖန်တီးပေးခဲ့တယ်။
ဖာနန်ဒက် – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆)
ယူနိုက်တက်ရဲ့ ပထမသွင်းဂိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့သလို လက်စတာရဲ့ ချေပဂိုးကလည်း ဘရူနိုနဲ့ မကင်းခဲ့ပါဘူး ။ ယူနိုက်တက်ကို2– 1 အနေအထားနဲ့ ဦးဆောင်ထားနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တယ်။
ဂျိမ်းစ် – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၅)
ယူနိုက်တက်သွင်းဂိုးရရှိဖို့ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် လိဒ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်က ခြေစွမ်းမျိုးတော့ ပြသထားနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာ တွေ့ရတယ်။
ရက်ဖို့ဒ် – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆)
အပိုင်အခွင့်အရေးတွေ လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ယူနိုင်တက်အတွက် ဦးဆောင်ဂိုး ရယူပေးခဲ့တယ်။ ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ဦးချင်းအနေအထား ဂိုးသွင်းခွင့်ရပေမယ့် ရှက်မိုက်ကယ် ကာကွယ်သွားခဲ့တယ်။
မာရှယ် – စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၅)
ဘောလုံးပျက်မှုမကြာခဏဖြစ်ခဲ့ပြီး ခြေစွမ်း ပြသနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလို အသင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ကစားနိုင်မှု နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။ ဂိုးသမားနဲ့ တစ်ယောက်ခြင်းတွေ့ဆုံပြီးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် VAR နဲ့ပြန်လည်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ လူကျွံနေခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရခြင်းမရှိပါဘူး
လူစားဝင်ကစားသမားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်တွေမှာ ကာဗာနီက အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဖာနန်ဒက်ရဲ့ သွင်းဂိုးရရှိအောင်ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် (၇)ရရှိခဲ့ပြီး ပေါ့ဘာနဲ့ တွန်ဇီဘီတို့ကတော့ စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက် (၆) သာရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒူဘိုငျးမွရေောကျ အခှငျ့ထူးခံ ကစားသမား စီရျောနယျဒို